Yakakwira CRI Dimmable Ceiling Lamp 50W 100W 150W LED Spotlight Track Mwenje Anti-Glare ye Museum Lighting Supermarket Lighting FT Series 9657, China High CRI Dimmable Ceiling Lamp 50W 100W 150W LED Spotlight Track Chiedza Anti-Glare ye Museum Lighting Supermarket Lighting FT Series 9657 Vagadziri, Suppliers, Fekitori - FETON CORPORATION Co, Ltd
Yakakwira CRI Dimmable Ceiling Lamp 50W 100W LEDW Spotlight Track Chiedza Anti-Glare ye Museum Lighting Supermarket Lighting FT Series 150
Kumusoro Kupedzisa Ruvara: Dema kana Yakagadzirirwa Ruvara
Lamp Muviri Chombo: Aluminium Alloy
◆ Kugamuchira iyo vaccum aluminiisi kuisirwa beam angle kuti ivimbise kusimba uye nekubatidza Refinosto simba.
◆ Kukurudzira chizvarwa chitsva chechipisi cheSOD chine kupenya kukuru uye hupenyu hwakareba, kupisa kwakadzika uye hupenyu hwakareba hwemakitsi emwenje.
Inowana truw yakatenderedza nhanho ye360 ° uye yakagadzika 90 ° mhando yekushandurwa kwemahara kuti usangane nechero gwara rekuvhenekera. Iko kuvhenekera kuri kuchinjika uye hakurasikirwe nechero ruzivo.
◆ Sainzi-yakagadzirirwa kupisa kupisa dissipater ine kutonhora kuri nani kupora.
◆ Kumusoro mwenje wakarapwa ne anodization, kutu-inodzivirira, kutaridzika kwehunyanzvi.
◆ Kupenya kwakanyanya, kushanda kwakanyanya, kuchengetedza simba, kushandisa magetsi mashoma.
◆ Yakabatanidzwa kupisa kuparadzira chimiro, yakadzika lumens kudzikira uye yakareba hupenyu hwakareba.
◆ Iyo kuora kwechiedza idiki kwazvo (pasingasviki 1% mushure me2000hrs maawa ekushanda).
◆ Rakareba nzvimbo yekuvhenekera uye nzvimbo dzakawanda dzekuvhenekesa.
Hapana kunonoka pakutanga kana kudziya nguva inodiwa.
(1) Nguo / shangu / boutique / chitoro chezvishongo
(2) Masupamaketi, Mahoro emakamisheni, Bhizinesi rekugamuchira Vaenzi, mamuseum
(3) Imwe nzvimbo yekutengeserana uye yekugara
1. FETON inopa kumira-kamwechete kwesekugadziriswa kwechiedza chirongwa chevakawanda vanozivikanwa vanogadzira mwenje, vanogadzira zvigadzirwa, magetsi emagetsi, uye yekushongedza kwemukati maratidziro nenzira yakasarudzika yemhando yekudzora sisitimu, inoshanda yekuchengetera keteni manejimendi yekugona uye nyanzvi dzinobata ma LED mazano.
2. Isu tinogona kugadzirisa zvigadzirwa kune izvo zvinodiwa nevatengi. Isu takagara tichisimbirira ne "mhando uye hunyanzvi" uye tinopa mutengo wemakwikwi evatengi vedu.
3. Yakakwira CRI uye inoshamisa kugona kwechiedza ichavandudza mufananidzo we chero chigadzirwa chakanangidzirwa kukwidziridzwa, kubata kutarisisa kwevatengi, uye kuwedzera mari yebhizinesi.